Ndeipi iPad yakanakisa yekuendesa kukoreji | ndinobva ku mac
Ndeipi iPad yakanakisa yekuendesa kukoreji
Mwana wangu akatanga basa rake makore maviri apfuura paFaculty of Philology. Uye zvakanyatsoenderana nekutanga munaGunyana 2020 yechizvarwa chechina che iPad Air. Ndakamupa imwe sechipo, uye ndakaedza kumunyengetedza kuti abvise mapepa ekutora manotsi uye kuyedza kuzviita nePadad neApple Penzura 2.
Iye zvino mugiredhi rechipiri, anongoshandisa iPad yake kutora manotsi kukoreji uye iMac yake kuita basa rechikoro. Mugore nehafu raave ari kukoreji, haana kumbopedza peji rimwe chete. Uye kuti nhangemutange mavara!. Ndiri kuzotsanangura kuti sei yazvino iPad Air iriyo inonyanya kukurudzirwa modhi vadzidzi vunivhesiti yemhando yese yeApple iPads.
Paula, mwanasikana wangu, anoenda kukoreji zuva nezuva kunodzidza. Ari mugore rechipiri rephilology paYunivhesiti yeBarcelona. Mafoda anorema nemabhuku ekunyorera ane manotsi atatakura mumazuva edu evadzidzi yava nhoroondo. Zvino, mubhegi rake, anongova nesangweji yake…neye iPad.
Pakatanga mujaho gore rapfuura, ndiye ega aive neIpad yekunyora manotsi mukirasi. Vamwe vese vaunodzidza navo vakashandisa a MacBook kana laptop. Vamwe vakamutarisa nekona yemaziso. Kunyanya avo vakanga vasinganyanyi kutaipa tsananguro dzemudzidzisi pakeyboard. Iyi kosi, pane vatove vakati wandei vakaenda kuPadad ... uye Apple Penzura, hongu.
Ikozvino mhando yemapiritsi eApple ndeye yakafara kwazvo, ine akawanda akasiyana modhi, saizi yescreen, maficha nemitengo. Saka a priori, zvinoita sekunge zvakaoma kusarudza kuti ndeipi modhi yePadad yekutenga yekushandisa mukoreji. Kana iwe uchitova mushandisi wePad, kubva pane chako chiitiko iwe unenge watove nazvo zvakajeka. Ngationei kuti ndeipi iPad yatinokurudzira, uye nei.
Iyo iPad pasina mubvunzo ndeimwe yeApple's flagship zvishandiso. Uye pamusika wepiritsi wezvino, ndiye mutungamiri asina kupokana. Zvese zviri zviviri muzvimiro uye mumashandisirwo eiPadOS. Uye Apple ine yakakura kwazvo siyana iPads, kune ese marudzi evashandisi: iPad Mini, iPad, iPad Air y iPad Pro.
Apple inokupa ma iPads mashanu akasiyana saka iwe unogona kusarudza iyo inonyatsoenderana nezvido zvako.
1 iPad mini uye iPad, yakaraswa
2 iPad Air uye iPad Pro
3 kuchengetedza, kubatana
4 Apple Penzura 2 uye keyboard
iPad mini uye iPad, yakaraswa
Kana isu tikatanga kubva pahwaro hwatinoda yedu ramangwana iPad kuti titore manotsi mukirasi, maviri ekutanga atotongwa kunze. Iyo iPad mini yehukuru hwayo hudiki. Ne skrini ye 8,3 inches, haisi iyo inonyanya kukurudzirwa sarudzo yekuishandisa sebhuku rekunyorera.
Uye ini zvakare ndinopa zano pamusoro peiyo iPad. Kana iwe uine bhajeti rakasimba kwazvo, chokwadi ndechekuti inogona kukubatsira, asi iyo drawback yandinoona ndeyekuti inongoenderana neyekutanga vhezheni yeApple Pencil. Chokwadi ndechekuti musiyano mukushandiswa uye kuita kweiyo Apple Pencil 2 kana ichienzaniswa nechizvarwa chekutanga, inoita kuti musanganiswa wePad plus Apple Penzura 1 isanyanya kukodzera kutora manotsi.
iPad Air uye iPad Pro
Saka isu chete tine iPad Air uye iPad Pro yasara.Chinhu chiri nyore pane idzi nyaya ndechekukurudzira iyo inodhura modhi, ine yepamusoro maficha. Kubheja kwakachengeteka pabhiza rinokunda. Asi kuva akatendeseka, zvinokwanisika kuti haufanirwe kushandisa 1.000 Euros pane iPad Pro kutora manotsi mukirasi.
Kana mari isiri dambudziko, enda kune a iPad Pro. Apple painobhabhatidza mudziyo une surname "Pro", imhaka yekuti yakagadzirirwa kushandiswa kwakanyanya padanho rehunyanzvi. Icho chishandiso chebasa chine huwandu hunogona kubatsira. Inowanikwa mumasikirwo maviri, 11 uye 12.9 inches, pasina kupokana ndiyo iPad yakanakisa yaunogona kutenga, uye uchaishandisa kusvika wapedza mujaho, kunyangwe ukadzokorora makosi akati wandei.
Asi kutaura chokwadi, iyo yakanyanya kuenzana modhi ine chekuita nekuita / mutengo uye inonyatso kuzadzisa zvinodiwa nemudzidzi weyunivhesiti, pasina mubvunzo ndiyo yazvino. iPad Air chizvarwa chechina. Iine saizi yakanaka yescreen, 10.9 inches, uye dhizaini yekunze yakafanana neiyo iPad Pro, ndiyo inonyanya kukurudzirwa sarudzo.
Kunyanya kuenderana kwayo ne Apple Pencil 2. Chokwadi ndechekuti zvinofadza kushandisa yechipiri chizvarwa cheApple digital penzura. Shandura iPad ive chinyorwa chaicho, pedhi yekudhirowa, dhizaini pedhi, kanivhasi yekupenda, uye chero chinhu chipi zvacho chaungafunga kuita nepenzura, chinyoreso, chinomaka kana bhurasho.
Kunze kwechiratidziro uye Apple Penzura 2 kuenderana, iyo iPad Air Air inomira kunze kwayo kuzvitonga kwakanaka (iwe unogona kupedza maawa manomwe panguva uchitora manotsi), chiverengero chezvigunwe padivi remagetsi bhatani, yakanaka pamberi uye kumashure makamera, USB-C port, Wi-Fi 6 uye LTE data yekubatanidza sarudzo.
Iwe une mashanu akasiyana iPad Air mavara.
Ngatiti wafunga kutenga iyo iPad Air. unopinda mu Apple Store kuti uise kurongeka, unosarudza ruvara, uye unosvika pane zvingasarudzwa zvekuchengetedza. Uye pano tinowana kukanganisa pane chikamu chekambani. Pasina kupokana, iyo yakanaka yekuchengetedza ingave 128 GB, asi Apple haitipi sarudzo iyoyo. Iwe unofanirwa kusarudza pakati pe64 GB, inoita seyakanaka kwandiri, kana 256 GB yauchaenda nayo kupfuura zvakakwana.
Iyo inzira yeApple yekudzosera kumashure purofiti. Inotangisa mudziyo wakanaka une mutengo wepasi wakagadziridzwa kukwezva kutarisa, asi "inoda" kukumanikidza kushandisa 170 Euros zvakawanda mudura rausingazombofi wakazadza.
Kana iwe uchizonyatso kuishandisa kutora manotsi uye zvishoma zvimwe, ne 64 GB uye kushandisa ICloud unogona kuva nezvakawanda. (Ndiyo iyo mwanasikana wangu ane uye haana kumboizadza nzira yese). Asi kana iwe uchidawo kuwedzera mamwe akadhindwa akateedzera kana mafirimu kuti ukwanise kuaona usingashandisi chinongedzo, semuenzaniso, unomanikidzwa kusarudza iyo 256 GB sarudzo.
Kana wafunga nezvekuchengetedza, unosara neimwe sarudzo: Wi-Fi chete, kana wifi + cellular. Pano chisarudzo chakajeka, uye iwe unofanira kutora sarudzo yechipiri. Iwe uri kuenda kunotenga mudziyo wekuishandisa kwenguva yakareba usiri pamba, mumakirasi akasiyana eiyo fakaroti, muraibhurari, uye mune inodyidzana yekudyira. Nzvimbo dzakawanda dzakasiyana usingazive kana iwe uchinge uine yakanaka Wi-Fi yekubatanidza mune ese. Saka iyo data yekubatanidza, kunyangwe iri panguva dzakatarwa kana iwe usina Wi-Fi, yakakosha.
Apple Penzura 2 uye keyboard
iPad, keyboard uye Apple Penzura. Mubatanidzwa wakakwana wemudzidzi.
Iwe unotova nesarudzo dzese dzakajeka, asi usati wapedza odha yako, usakanganwa kubatanidza a Apple Pencil 2 Sezvishoma. Iyo yekunze kiibhodhi ikesi yakaparadzana, asi peni ndiyo inofanirwa. Iko hakuna chikonzero mukutenga iPad kuti utore manotsi kukoreji kana ukasaishandisa neApple Penzura.
Unogona kuedzwa nepfungwa yechizvarwa chekutanga Apple Penzura, nekuti yakachipa. Kanganwa. Pamusiyano mudiki wemutengo, Apple Penzura 2 inopa makumi mana kutendeuka kune 1. Kunyaradza kwekushandisa uye nyore kurodha, uye nekutevera mabhenefiti.
Uye pakupedzisira, sarudzo ye yekunze keyboard. Kana iwe ukatarisa muApple Store, unogona kuve nechirwere chemoyo. Iwe une Magic Kiyibhodhi, ye339 Euros, uye Smart Keyboard ye199 Euros. Sezvineiwo, iwe une akawanda anowirirana echitatu-bato kiyibhodhi ane anovhara paAmazon kubva makumi mana maEuro, anoshanda zvakanyanya.
Chokwadi ndechekuti kana uine imwe komputa kumba, Apple kana kwete, hauzodi kiibhodhi. Ndiri kukuudza uchiona mashandiro anoita mwanasikana wangu. Shandisa yako iPad Air neApple Penzura 2 chete, kutora manotsi mukirasi (Manotsi Akanaka ndiyo yakakwana app yeiyo). Zvadaro, kune rimwe basa rose rinoda kushandisa keyboard, sekunyora mapepa kana maemail, unozviita neMac yako kumba. Zviripachena, kana iwe uine chete iPad, kutenga kweiyo keyboard uye mbeva zvinosungirwa.
Uye ndizvo chete. Zviri pachena kuti pakupedzisira iyo iPad Air inobuda kune yepamusoro. Between 649 Euros iyo inonyanya kukosha modhi, uye 959 Euros iyo inodhura zvakanyanya, pamwe ne135 Euros yeApple Pencil 2. Asi pasina kupokana, ndiyo inonyanya kukurudzirwa chishandiso chekutora manotsi kukoreji, zviri nani pane laptop, pasina kupokana. Chiitiko chekukwanisa kuvatora neApple Pencil 2 pane iPad yakakosha huremu hwayo mugoridhe. Uye kana uine kusahadzika, mira neApple Store uye edza kunyora mune imwe yacho. Uchaenda nebhegi jena rine apuro resirivha rakarembera paruoko rwako...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » Ndeipi iPad yakanakisa yekuendesa kukoreji
Mhoro, yakanaka positi, ungaite bhajeti rakazara? Kana ini ndichiti zvakazara ndinoreva iyo HW + SW, panguva ino tinoziva kuti iPad inogona kukwana, asi chinonyanya kukosha ndechekuti inoshandiswa sei uye kana ichishanda, uye nekuda kweizvi tine SW, zvikumbiro zvinoita. kushandisa? Unogona kuzvinyora nemutengo wavo here?
Ini ndinofunga kuti iwe unogona kuchengetedza nekutenga iyo vhezheni pasina mbozhanhare, sezvo iyo iPad inobatanidza zvinoshamisa kune chero foni kugovera Wi-Fi, uye isu tinogara takatakura foni nesu. Ndine iPad Pro, uye ndinofunga kuti iyo iPad Air zvirokwazvo yakawandisa kune chero munhu, dai iyi vhezheni yaivepo pandakaitenga, ndingadai ndisina kutenga iyo pro, nekuti kune akawanda simba.
Kusagadzikana kunowanikwa mumakamera eMac asi Apple aitoziva nezvazvo
Iyo inopa yeHomePod mini ine skrini inooneka